ယုန်လေးကို ရန်ကုန်အထိ ပြန်လာကန်တော့ခဲ့ကြတဲ့ Rap ကျားကြီးနဲ့ MC ကယားလေး - The Lifestyle Myanmar
MMA မှာ မြန်မာရိုးရာ လက်ဝှေ့ ကို ချပြတော့မဲ့ အောင်လအန်ဆန်း
မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဒေါ်လာ ၂၀၇ သန်းကျော် ထပ်မံဝင်ရောက်လာ
ဥရုဂွေးနဲ့ ပွဲမှာ ကစားသမား၅ယောက်ကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ မက်ဆီရဲ့မျက်လှည့်ဆန်ဆန် လှည့်ကွက်
Victoria အမှု ၊ မှုခင်းဆရာဝန်ကြီးနှင့် ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်တို့အား စစ်ဆေးမည်
မြန်မာတို့ရဲ့ ချွေးနည်းစားတွေကို မတရားယူနေတဲ့ အဆိုပြိုင်ပွဲရဲ့ မဲပေးစနစ်
သံစားကျောက် (သို့) မြန်မာတို့ရဲ့ အသိဉာဏ်ကို စမ်းသပ်ခြင်း
ဘဘဘိုကလေးတင့်အောင် ကိုယ်တိုင်ကတောင် ချီးကျူးတာကိုခံခဲ့ရတဲ့ အေးမြဖြူ
ဇနီးဖြစ်သူ ဇုံဇုံနဲ့ တရားဝင်ကွာရှင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာလိုက်တဲ့ အဆိုတော်ဟန်ထူးလွင်
ပေါင်မုန့်သည် ဖွားဖွားဆီ မရောက် ရောက်အောင်သွားခဲ့တဲ့ Sinon Loresca ( ဗီဒီယို )
ငယ်ငယ်ထဲက ကွဲနေတဲ့ အဖေကို ပြန်တွေ့ခွင့်ရသွားတဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါ ပြိုင်ပွဲဝင် ထက်အဉ္ဇလီ
Home Entertainment ကျေးဇူးရှိတဲ့ ယုန်လေးကို ရန်ကုန်အထိ ပြန်လာကန်တော့ခဲ့ကြတဲ့ Rap ကျားကြီးနဲ့ MC ကယားလေး
ကျေးဇူးရှိတဲ့ ယုန်လေးကို ရန်ကုန်အထိ ပြန်လာကန်တော့ခဲ့ကြတဲ့ Rap ကျားကြီးနဲ့ MC ကယားလေး
အနုပညာမှာ အားနည်းပေမယ့်လည်း သူတို့တတ်နိုင်တဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုလေးနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Rap ကျားကြီးနဲ့ MC ကယားလေးတို့နှစ်ဦးကတော့ အဆိုတော် ယုန်လေးကြောင့် ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့သီချင်းလေးကိုလည်း ဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီး ပရိသတ်တွေဆီ ချပြခဲ့ပြီးပါပြီ။
လတ်တလောမှာတော့ ယုန်လေးက ကျေးဇူးသိတတ်လွန်းတဲ့ Rap ကျားကြီးနဲ့ MC ကယားလေးတို့နှစ်ဦးကြောင့် ပျော်ရွှင်ပီတိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ နယ်ပြန်ပြီးကာမှ ကျေးဇူးရှိတဲ့ ယုန်လေးကို ပြန်လာကန်တော့ကြတဲ့ သူတို့နှစ်ဦးကတော့ တကယ့်ကို ချစ်ဖို့ကောင်းကြတဲ့ တပည့်တွေပါပဲနော်။
ယုန်လေးကတော့ “MV လေးထွက်ပြီးထဲက ကျွန်တော်တို့ ပျော်လွန်လို့ ငိုပြီးပြီ ဆိုပြီး ဖုန်းဆက်ပါတယ် ။ အခု ရန်ကုန်ရောက်တော့လည်း ကွင်းထဲ အထိ လာကန်တော့တဲ့ ညီလေးနှစ်ယောက်ကို တကယ်ကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်မိပါတယ် ။လေ့လာစရာတွေ လေ့လာပြီး ကိုရူးသွတ်တဲ့ အနုပညာကို ဆက်လက် ရူးသွတ်နိုင်ပါစေ . Nov 8 မှာ Music World Nov9မှာ Lighting Festival Nov 12 မှာ လမ်းမတော် တန်ဆောင်တိုင် မှာ သူတို့ဖျော်ဖြေမှာပါ . အားပေးကျဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။” ဆိုပြီး သူ့ကို အားကိုးကြတဲ့ ညီလေးနှစ်ယောက်ကို ရှိုးပွဲတွေလည်း ခေါ်ဆိုမယ့်အကြောင်း ပြောထားပါသေးတယ်။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အရမ်းကို ကြည်နူးဖို့ကောင်းတဲ့ ယုန်လေးနဲ့ တပည့်နှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ယုန်လေးကို ရန်ကုန်အထိ ပြန်လာကန်တော့ခဲ့ကြတဲ့ Rap ကျားကြီးနဲ့ MC ကယားလေး
Previous articleမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ စံချိန်မီ ငါးမူးသား ရွှေဒင်္ဂါးကို ပုံစံသစ်ဖြင့် ရောင်းချမည်
Next articleဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်၌ မိုးကုတ်သို့ လာမည်
တိုကျို အိုလံပစ်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အတွက် သက်ထားသူဇာကို UAB ဘဏ် ကူညီမည်ဟုကြေငြာ
Web Master - November 16, 2019
ယူအေဘီတာဝါတွင် သက်ထားသူဇာနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တို့က အထောက်အပံ့နှင့် ပတ်သက်သည့် Sponsorship စာချုပ်ကို ယနေ့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
တာဂျစ်စတန်အား အနိုင်ယူခဲ့သည့် မြန်မာအသင်းကို AYA Bank က ကျပ်သိန်း ၇၀၀ ချီးမြှင့်